कर्मचारीहरूको आफन्त र चिनेजानेहरुको स्वाब पहिले... | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
कर्मचारीहरूको आफन्त र चिनेजानेहरुको स्वाब पहिले…
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:५३
भदौ २४ गते मेरो पिताजी बिरामी पर्नु भयो । घोराहीको दीप ज्योति अस्पतालमा उपचार गराउँदा अल्सर देखियो । उहाँको अवस्था झनै कमजोर हुँदै थियो । उहाँ अस्पतालमा भर्ना हुनु भयो । रगत चढाउनुपर्ने भयो । अचेतझैँ अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनलाई रगत दिँदै अरू उपचार हुँदै थियो । त्योसँगै डा. मीनचन्द्र अधिकारीको सल्लाह अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भए नभएको बारेमा स्वाब पनि दिनु पर्ने भयो । अर्को दिन मैले मेरा बिरामी पिताजीको स्वाब दिन घोराही १५ को सङ्कलन केन्द्रमा जाँदाको भोगाई एकदम नमिठो रह्यो । भर्ना गरिएका, शरीरमा रगत दिँदै गरेका गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका उनलाई म आफैले त्यहाँ पुर्‍याएको थिएँ, स्वाब दिनेहरूको सुचीमा उनको नाम पनि थियो । श्रीमती (सुलोचना गौतम) घण्टौँ लाइनमा पालो कुरिरहेकी थिइन् ।
यस्तो बेलाको मनोदशा, छटपटी र जोखिम कस्तो हुन्छ भन्ने मैले नजिकसँग भोगेँ । संसार कोभिड–१९ विरुद्ध लड्दै छ । सङ्क्रमित पहिचान गरी उनीहरूलाई कोरोनामुक्त बनाउँदै समाजलाई नै कोरोनाबाट मुक्त बनाउन अहिले संसारका सबै संरचनाहरू परिचालित छन् भन्ने सुनेको तर मैले व्यवहारमा त्यसको महसुस गर्न पाइन । अहँ कत्ति पनि गर्न पाइन । यस्तो भोगाई मेरो मात्र हो कि अरूको पनि हो त्यो म दाबीको साथ भन्न सक्दिन तर मलाई लाग्छ धेरै भुइँमान्छेको भोगाई यस्तै यस्तै होला । त्यसमा पनि नेपालमा मात्र यस्तो हो कि अन्यत्र पनि यस्तै हो त्यो भने थाहा छैन । तर यस्तो महामारीमा पनि व्यवस्थापन निकै कमजोर थियो ।
मैले मेरो वडाको अध्यक्ष भरत अर्याललाई फोन गरेँ । उहाँले पिताजीको वर्ष सोध्नुभयो, मैले ‘६८ वर्ष’ भनेँ । ‘म नाम पठाइदिन्छु १२ बजेतिर पद्मोदय जानुहोला’ भन्नुभयो । उहाँ व्यस्त मान्छे । नाम पठाउन भुल्न सक्नुहुन्छ भनेर मेरी श्रीमती सुलोचनालाई १० बजे वडामा गएर सिफारिस ल्याउन भनेँ । उनले वडा अध्यक्षलाई फोन गरिन् । नाम गइसकेको रहेछ । अनि मैले सुलोचनालाई १२ बजे पद्मोदय गएर लाइन लाग्न र पिताजीको पालो आउँदा फोन गर्न भनेँ । पिताजी अलिक गम्भीर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला । त्यसैले, हामी भने ब्लड बैङ्कबाट १ पिन्ट रगत लिएर चढाउने तयारीमा थियौँ । म पत्रकार भएकाले स्वाब लिन जाँदा ‘लाइन मिचेर पत्रकारले सेवा लियो भनेर कसैले भन्लान्’ भन्ने पनि ठानेँ । पिताजीको अवस्था अचेतझैँ थियो । उहाँलाई त्यो बेलाको कुनै कुरा याद नै छैन । फेरि पत्रकारको बाबुको स्वास्थ्य जति महत्त्वपूर्ण छ, अन्य नागरिकको स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले पालो मिच्न चाहिन र सुरुमै सुलोचनालाई लाइन लाग्न पठाएँ । पालो आयो, सुलोचनाले फोन गरिन् । अनि म पिताजीलाई गाडीमा लिएर त्यहाँ पुगेँ । स्वाब सङ्कलन केन्द्र पुरै अस्त व्यस्त थियो ।
खटिएका कर्मचारीहरूले फोन गर्दै घरपरिवारका सदस्यलाई बोलाउँदै स्वाब लिइरहेका थिए । म नजिकै गई ‘ब्लड चढाउन रोकेर आएको छु, पालो पनि आयो रे !’ भन्दै स्वाब लिन आग्रह गरेँ । त्यो बेला पिताजी गाडीमा सुतिरहनु भएको थियो । म पौने घण्टा त्यहाँ अनुनय–विनय गर्दा कोही कर्मचारीले सुन्न चाहेनन् । उनीहरूले आफ्ना आफन्तहरूलाई बोलाई बोलाई स्वाब लिइरहेका थिए । त्यो दृश्य मेरो अगाडि थियो । म भने पालो आउला भनेर पर्खिरहेँ । त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूको आफन्त अनि चिनेजानेहरुको स्वाब लिएर अझै सकिएन । साँझ अबेरसम्म पनि पालो नआएपछि भोलिपल्ट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४,४६० रुपैयाँ तिरेर पिताजीको स्वाब परीक्षण गराए । कोरोना देखियो ।
त्यसपछि डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार म कोहलपुरस्थित कोभिड अस्पतालमा आएँ । कोभिड अस्पतालमा के हुने हो ? कसरी उपचार हुने हो भन्ने छुट्टै खुलदुली थियो नै । पिताजीलाई लिएर अस्पताल पुगेपछि बिरामी बाहेक अन्यलाई जान निषेध रहेछ । अचेत अवस्थाका पिताजी । एक्लै कसरी कोभिड अस्पतालमा पठाउन मनले मान्थ्यो र ? अस्पतालमा कोभिडको उपचारको लागि पिताजीलाई छोड्न गएका मेरा पाइला एक्लै घर फर्किन मानेनन् । मैले त्यहाँका डाक्टरहरूलाई गम्भीर अवस्थाका पिताजीलाई आफ्नै रेखदेखमा उपचार गराउने भनेर अनुरोध गरेँ । उहाँहरू सुरुमा त सहजै मान्नु भएन । किनभने कोभिड सरुवा रोग हो । एक्लै उपचार गराउनु पर्छ भन्ने बुझाउँदै आइएको छ । मेरो जिद्दीपनको अगाडि डाक्टरहरूको पनि केही लागेन । त्यो सही गरेँ वा गलत मलाई थाहा छैन तर पिताजीको उपचारको लागि त्यही बसेँ । कुरुवा भएर । त्यसको चार दिनपछि टाइफाइडको बिरामी परेकी माताजीलाई पनि कोभिड देखियो ।
कोभिड अस्पतालमा अल्सरसहित कोरोना सङ्क्रमण देखिएका पिताजी र टाइफाइडसहित कोरोना सङ्क्रमण देखिएकी मेरी माताजीलाईसंगै राखेर उपचार भयो । पिता–माता अस्पतालमा, म कुरुवा, मेरा घरका सबै ‘होम–क्वारेन्टाइन’मा थिए । घोराहीको स्वाब सङ्कलन केन्द्रमा जति नमिठो भोगाई रह्यो, धन्न अस्पतालमा भने त्यस्तो भएन । अस्पतालमा बाहिर चलाइएका हल्ला जस्तो रहेनछ । ‘डाक्टरहरूले राम्रोसँग उपचार गर्दैनन्, वास्ता गर्दैनन्’ भन्ने भ्रम थियो बाहिर । मैले भने त्यस्तो महसुस गरिन । मेरो पिताजी-माताजीसँगै अस्पतालमा ५४ जना थियौँ । म एक जना मात्रै कुरुवा थिएँ । चौबिसै घण्टा बिरामीहरूको पालै पालो डाक्टहरुले स्वास्थ्य जाँच गर्नुहुन्थ्यो । सरकारी आइसोलेसन भए पनि राम्रै व्यवस्थापन थियो । डा. शिशिर रेग्मी, कुलराजले राम्रो हेरचाह गर्नुभयो । अस्पतालमा खानाको व्यवस्था पनि थियो । कहिलेकाहीँ म मेरो माताजी पिताजीलाई बाहिरबाटै मगाएर थप पौष्टिक खानाहरू पनि खुवाउँथेँ । त्यहाँको स्टाफ नर्स उर्मिला रेग्मीले पनि कोभिडका बिरामीहरूलाई समय समयमा जाँच गर्न आउनुहुन्थ्यो । एउटा कोभिडको बिरामीले स्वाब दिन जति कठिन छ । त्योभन्दा निकै सहज कोभिड देखिएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रहेछ । किनभने यो मेरो भोगाई र तितो यथार्थ पनि हो । स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई स्वाब लिन पो नाता, गोता, आफन्त, इष्टमित्र प्राथमिकतामा पर्दो रहेछ त अरूको लागि त त्यो आकाशको फल आँखा तरी मर् जस्तै पो हुँदो रहेछ । कोभिड देखिसकेपछि बिरामीहरूको त सम्मान रुपमा उपचार हुँदो रहेछ ।
अहिले कोभिड अस्पताल, कोहलपुरबाट माताजी-पिताजी डिस्चार्ज भई सक्नु भएको छ । उहाँ दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले ठिक छ । म पनि पिताजी माताजीसँगै कुरुवा बसेको १८ दिन पछि घरमा गएको हुँ तर खुसीको कुरा भन्नुपर्छ मेरो रिर्पोट नेगेटिभ आयो । अहिले हामी परिवारमा सबै जनासँगै छौँ । पौष्टिक खानाको विशेष ध्यान सहित माताजी पिताजीको हेरचाह गरिरहेका छौँ। कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । उनीहरूको नजिक पनि जान हुन्न भन्ने भ्रम मात्र रहेछ जस्तो लाग्यो । मैले नै अचेत अवस्थामा रहेका पिताजीलाई मेरै हातले खाना खुवाएको छु । माताजी पिताजीलाई शौचालयसम्म लगेको छु । अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा डाक्टहरुको तर्फबाट हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै समस्या हुँदैन रहेछ तर परिवारको निगरानी, हेरचाह, पौष्टिक खानपानको पनि उत्तिकै साथ चाहिन्छ । कोभिडको अर्को उपचार आत्मबल पनि हो । अहिले हामी सबै जना घरमै छौँ । पिताजी र माताजीको स्वास्थ्यका बारेमा चासो राख्दै कामना गर्ने सबैप्रति हामी कृतज्ञ छौँ ।
यो कथा विपुल पोख्रेलसंग सपना बोहराले कुराकानी गर्नुभएको आधारमा लेखिएको हो । विपुल पोख्रेल नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन् ।